ललितपुरको विकास नै मेरो एजेन्डा हो :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
ललितपुरको विकास नै मेरो एजेन्डा हो
उदयशमशेर राणा, ललितपुर १, प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार
० तपाई ललितपु्र १ बाट निर्वाचित सांसद, तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति, तर तपाईको प्रतिस्पर्धीले त मैले गर्दा उदयशमशेर चिनिएको छ भनेर भाषण गर्दै हिँडेका छन् नि ?
– राजनीतिक र गैरराजनीतिक व्यक्तिमा फरक भनेको नै यही हो । जो मसँग आज चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, उनी राजनीतिक व्यक्ति होइनन् । उनमा राजनीतिक संस्कार नै छैन । उदयशमशेर राणा २०४८ सालदेखि ललितपुरका प्रत्येक कुनाकाप्चा पुगेको छ । मेरो बुबा चुनाव लड्दा तीनैपटक म उहाँसँग प्रत्येक गाउँगाउँ पुगेको थिएँ । म आफैं २०६४ सालमा चुनाव लडेर थोरै अन्तरले पराजित भएँ । २०७० सालमा फराकिलो अन्तरले मलाई त्यहाँका जनताले विजयी गराए । उदयशमशेर तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष, निर्वाचित सांसद, अहिले अर्थराज्यमन्त्री भएको मान्छेलाई एउटा प्रहरी अधिकारीले चिनाइराख्नुपर्दैन । २०४८ सालदेखि आजका दिनसम्म ललितपुर १ का जनतासँग भिज्दै आएको उदयशमशेरलाई मैले चिनाएँ भनेर उनले आफूलाई ‘जोकर’ का रूपमा प्रस्तुत गरे । आज मेरो क्षेत्रका जनताहरूले उनलाई नै गिज्याइरहेका छन् ।
० विपक्षीहरूले त तपाईलाई स्थानीय पनि नभएको र प्रजातन्त्रविरोधी राणा परिवारको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् नि ?
– जो व्यक्ति तीन दशकदेखि निरन्तर त्यो क्षेत्रको विकासमा सक्रिय छ, त्यहाँका जनताको सुख–दुःखमा सँगसँगै छ, त्यो व्यक्ति टाढाको हुने अनि जो आज एकाएक टिकट लिएर राजनीतिमा आउँछ, जसको त्यहाँ कुनै योगदान छैन, भूगोल, त्यहाँका समस्या, सम्भावना, स्थानीयलाई चिन्दैन अनि त्यो व्यक्तिले यस्ता कुरा गरेको सुहाउँछ ? हिजो मसँग चुनाव लडेका विपक्षी साथीहरूले समेत यस्ता कुरा गरेका थिएनन् । तर अहिले मेरो प्रतिस्पर्धीले सतही कुरा गरेर आफ्नो राजनीतिक करियर सुरुमै कमजोर भएको पुष्टि गरेका छन् ।
जहाँसम्म म राणा परिवारको कुरा छ, प्रजातन्त्रका लागि लड्दा दुःख पाएको राणा परिवारको सदस्य हुँ । पञ्चायतविरुद्ध उभिँदा मेरो परिवारले पाएको दुःख हामीलाई थाहा छ । राणा भएकै कारण सबै प्रजातन्त्रविरोधी हुन् भन्नु राजनीति र इतिहासको ज्ञानको कमी हो । मेरो बुबा सागरशमशेरलाई नचिन्ने सायदै होलान्, मेरो ठूलोबुबा भरतशमशेरले प्रजातन्त्रका लागि बिनासर्त आफ्नो पार्टी नै कांग्रेसमा विलय गराएका थिए । जबकि उहाँको पार्टी संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । सुवर्णशमशेरका बारेमा मैले धेरै भनिराख्नुपर्दैन । त्यसकारण राजनीतिको ‘र’ पनि नबुझेका र राजनीतिक संस्कार नभएकाले जनतामा भ्रम फैलाउन यस्ता कुतर्क गर्छन् । त्यसले मेरो राजनीतिक दौडमा कुनै अप्ठेरो पार्दैन ।
० चुनाव आउन अब करिब एकता साता बाँकी छ, दौडधूप कस्तो छ ?
– स्वाभाविक रूपमा व्यस्तता बढेको छ । समय जति नजिकिँदै छ, त्यति धेरै भेटघाट र दौडधूप छ । घरदैलो, चुनावी सभा भइरहेका छन् ।
० तपाईका एजेन्डा के हुन्?
– म राजनीतिमा लागेको अरु कुनै स्वार्थले होइन । राजनीतिमार्फत देश र जनताको सेवा गर्न‘ नै मेरो ध्येय हो र म त्यसैका लागि सधैं लागिपरेको छु । राजनीतिबाहेक मसँग धेरै विकल्प थिए । परिवारको व्यापार मात्र होइन, म अमेरिकामा राम्रो जागिर छाडेर राजनीतिमा आएको हुँ । त्यसकारण म राजनीतिमा आउनुको एउटै कारण समाजको विकास र समृद्धि नै हो । विगतमा झैं यसपटक पनि विकास र समृद्धिको मूल नारा लिएर म मतदातामाझ गएको छु ।
० अघिल्लो निर्वाचित सांसदको कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
– जनताका अपेक्षा धेरै छन् । तर राज्यसँग सीमित स्रोत छ । त्यसकारण एकैपटक सबै जनताका माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, तर मैले चार वर्षमा जे जति काम गरें, गर्न सकें त्यसप्रति जनतामा निराशा पक्कै छैन । चार वर्षमा मैले आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा होस् या अन्य विभिन्न सरकारी गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत धेरै काम भएका छन् । कतिपय काम बहुवर्षीय हुन्छन्, आजको भोलि सम्पन्न हुँदैनन् । अझै धेरै गर्नुछ, त्यसैले पनि म यतिबेला जनताका बीच विकासका कामलाई अझै तीव्रता दिन र थप विकास गर्न मलाई मतदान गर्न‘होस् भनिरहेको छु ।
० मतदाताहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ?
– म २०७० सालमा एउटा उम्मेदवारका रूपमा मतदाताका बीचमा जाँदै गर्दा धेरैले मलाई आशिष या निर्देशन दिएका थिए कि संविधान समयमै बनाउनू भनेर । म सदस्य रहेको संविधानसभाले समयमै संविधान बनायो । त्यो संविधानको एक हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा म आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्छु । जनताको प्रमुख जनादेश हामीले पूरा ग¥यौं । त्यतिबेला स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले एउटा सांसदको काँधमा धेरै जिम्मेवारी थियो । गाउँको सामान्य सिफारिसदेखि संविधान बनाउनेसम्मको काममा एउटा सांसद व्यस्त हुनुपर्ने स्थिति थियो । त्यसका बाबजुद पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि म कहिल्यै पछाडि परिनँ । २०४८ देखि २०७० सालसम्म चारजना सांसद यहाँका जनताले जिताएर पठाए, तर कुनै पनि विकास भएन । तर मैले चार वर्षको बीचमा २५ वर्षमा भएको विकासभन्दा १० गुणा बढी विकास गरेको छु ।
० महत्वपूर्ण काम के के हुन् त ?
– पहिलो काम त संविधान लेखन नै हो । पहिलो कुरा त, करिब ६ दशकअघि सुरु भएको कान्ति लोकपथ अलपत्र अवस्थामा थियो । काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने छोटो दूरीको यो मार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन । विगतका सांसदहरूले कान्ति लोकपथको सपना बाँडेर सधैं चुनाव जिते, तर कामलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । तर म निर्वाचित भएपछि कान्ति लोकपथ निर्माणले गति लिएको छ । करिब साढे तीन अर्ब बजेट यो सडकका लागि विनियोजन भएको छ । यो सडक सम्पन्न भयो भने दक्षिण ललितपुरको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।
यस्तै, एडिबीको सहयोगमा ललित घुम्ती निर्माण कार्य भइरहेको छ । यसमा एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । टुंगुन करिडोर (भट्टेडाँडादेखि गोटिखेलसम्म जोड्ने बोटो), चन्दनपुर, ठूलादुर्लुङ, गिम्दी, आश्राङ हँुदै बगुवा जाने बाटोसहित अन्य साना विकासका धेरै काम भएका छन् ।
० वाम गठबन्धनले परिणामलाई असर पार्दैन?
– अन्त के छ मलाई थाहा भएन । ललितपुर १ मा वाम गठबन्धनले मेरो विजयलाई रोक्न सक्दैन । जनताले कसैको अनुहार हेरेर होइन, उसले गरेको काम र योगदानलाई हेरेर मतदान गर्ने भएकाले मतदाता मलाई जिताउन आतुर छन् । उदयको विकल्प अरु हुनै सक्दैन भन्नेमा जनता विश्वस्त छन् । २०४८ देखि २०७० सम्म निर्वाचित सांसदहरू नेता त बने, तर हाम्राका लागि केही पनि गरेनन् भनेर त्यहाँका जनताले भनिरहेका छन् ।
Tarun Khabar0response सोमबार,११ मंशिर २०७४ 2331 Views